android ဖုန်းများအတွက် SBK16 တရားဝင်မိုဘိုင်းဂိမ်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » SBK16 တရားဝင်မိုဘိုင်းဂိမ်း
SBK16 တရားဝင်မိုဘိုင်းဂိမ်း APK ကို
အဆိုပါ 2016 Motul fim အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံသစ်တစ်ခုပြိုင်ဘက်ရှိပြီးကြောင်းသင်ဟူ SBK တရားဝင်မိုဘိုင်းဂိမ်းနောက်ကျောနှင့်ယခုကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး "ဒါဟာအားကစား၏ Technical ဖမ်းယူသည့်ဖျော်ဖြေမှုဂိမ်းပါပဲ။ " (Pocket ဂိမ်းကစားသူ)!
"တော်တော်လေးခြေဆွံ့သောသူနှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အားကစားခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးအကြားတစ်ဦးကတောက်ပတဲ့အစက်အပြောက်။ " (စစ်ဆင်ရေးအားကစား)
ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးစိန်ခေါ်မှုမျိုးနွယ်အပုဒ်မှတဆင့်အရှိန်တစ် 200 HP ကသားရဲ၏ကိုင်တွယ်များ၏စိတ်လှုပ်ရှားတွေ့ကြုံခံစား: Aprilia, Kawasaki, ဟွန်ဒါ, Ducati, သင်္ဘော MV Agusta, BMW ကားသို့မဟုတ် Yamaha ... ရွေးချယ်မှုဥစ္စာပါ!
ချန်ပီယံယောနသန်သည် Rea နှင့်အခြားစစ်မှန်သော SBK မြင်းစီးနန်းသက်ဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်း-ပြောင်းလဲဆုလာဘ်သော့ဖွင့်ဖို့သစ်ကိုစမ်းသပ်စီးနင် mode မှာသင့်ရဲ့စီးနင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုင်းတာ။
ပြောင်းလဲနေသောအလင်းရောင်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူလက်တွေ့ 3D ဂရပ်ဖစ်ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိစားသောက်နှင့် 10 ကွဲပြားခြားနားသောထိန်းချုပ်မှု options များကဲ့သို့အများအပြားနှင့်အတူရိုင်းသွားပါ - ရွေ့လျားမှု, ကို virtual Joystick နှင့်မိုဘိုင်းဂိမ်း pad ပါအပါအဝငျ။
ဂိမ်းအသစ်ရူပဗေဒရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်နောက်ဘက်ဘီးဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲရှုံးနှင့်သင်သည်သင်၏ဆိုင်ကယ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်တိုက်ထုတ်သကဲ့သို့သင်တို့ချဌာနရှိရာကိုအပေါ် skidding တာယာများ၏ screech စကားကိုနားထောငျအထိကန့်သတ်ဖို့တွန်းအားပေး။
- 13 အပေါ်သတ်မှတ်ထား4ကျည် Lausitz ၏သစ်ကိုဂျာမန်ဆားကစ်အပါအဝင် continents
- ကယခင်ကမ္ဘာ့အချန်ပီယံတွမ် Sykes နှင့် Sylvain Guintoli အပါအဝင်နိုင်ငံတကာတန်းစီဇယားထဲကနေ 24 ကြယ်ပွင့်မြင်းစီး,
- ချန်ပီယံရှစ်အမြန်လူမျိုး, အချိန်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုသက်သေပြခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကြော်ငြာ-အခမဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝင်ငွေစမ်းသပ်မှုတွေ၏စီးရီးအပေါ်ယူဘယ်မှာစမ်းသပ်ခြင်းစီးနင်အပါအဝင်4ဂိမ်း Modes သာ,
- မိုဘိုင်းဂိမ်း Controller ကိုနှင့်အတူ၎င်း၏လေးရယ်မှကစားခံစားကြည့်ပါ
SBK16 အဖြူရောင်-လက်ခေါက်ဆစ်အထူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းပြိုင်ပွဲ Race စတိုင်တစ်ခုတိကျကိုယ်စားပြုမှုသေချာနှင့် Android အပေါ်အများဆုံးလက်တွေ့ကျကျမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကားအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းရန် Dorna WSBK အဖွဲ့နှင့် တွဲဖက်. တီထွင်ခဲ့သည်။
SBK16 ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သော်လည်းဂိမ်းသင်တို့ကိုလည်းကြော်ငြာဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုတဲ့ Premium ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်ထောက်ပံ့: သင်ထားတဲ့ optional ကို In-app ကိုဝယ်ယူမှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးသို့မဟုတ်သင်အသစ်များကိုစမ်းသပ်စီးနင် mode ကိုရိုက်နှက်ဖြင့်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။
အကြီးအဗီဒီယိုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပိုပြီးထွက်များစစ်ဆေး!
Digital_Tales အားဖြင့် tweets
- အန်းဒရွိုက် 5.0 သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း running devices တွေကိုထိခိုက် bug ကို crashing Fixed ။
249.88 ကို MB